Adobe dia nanolotra ireo loko telo amin'ny fiovan'ny toetr'andro | Famoronana an-tserasera
Niara-niasa i Adobe sy Pantone handrafitra izay loko telo ireo ny fiovan'ny toetrandro. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ONG The Ocean Agency (TOA) hampahafantatra ny vokadratsin'ny tanan'olombelona amin'ny tontolo iainana dia ireo no loko nofidina.
Izy ireo dia loko telo: Mavo mamirapiratra, manga mamirapiratra ary volomparasy mamirapiratra. Na inona no mety ho mavo, manga sy volomparasy. Loko telo izay andramana hanamelohana ny fotoana iainantsika sy ny fijerin'ny governemanta maro ny fomba hafa hisorohana ny fandraisana anjara.
Rafitra tsy maharitra izay hita ao amin'ny ny fahaverezan'ny lokon'ny haran-dranomasina ny ranomasintsika mba hahatonga azy ireo ho fotsy. Ireo loko marevaka ireo dia manjavona mba hamela ny toerana maty izay nitomboan'ny fiainana isa-minitra.
Vao tsy ela akory izay ny ONG The Ocean Agency a Emmy noho ny fanadihadiana nataony "Chasing Coral" ary fahombiazana tamin'ny fitondrana Google Street View anaty rano. Ho an'ny anjaran'i Adobe, Loko no nampiasaina mifantina ireo loko vaovao telo noresahinay ireo.
Ny zavatra nataon'i Adobe dia raiso ny soatoavina sary manokana momba ny fluorescent LAB avy amin'ny ONG amin'ny Adobe Stock ary nanova azy ireo ho RGB. Pantone dia niandraikitra ny famoronana paleta fanao mba hahafahan'ny fiovan'ny toetr'andro miaraka amin'ireo loko telo ireo.
Un manao antso avo ho an'ny mponina rehetra eto amin'ity planeta ity mba handaminana ny tenany ary handray andraikitra manoloana ny raharaha. Farafaharatsiny mba ho tonga saina ary hanatrika eo rehefa misy hetsika manerantany handrava ny rafitra misy ankehitriny izay mitantana ny fampahantrana ny tontolo iainantsika sy ny ranomasina.
Loko telo ampiasaina amin'ny asanao ary amin'izany dia miara-miasa manoloana ny antso hanohitra ny fiovan'ny toetr'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ireo no lokon'ny fiovan'ny toetrandro araka ny filazan'i Adobe sy Pantone
Ny Affinity Designer sy ny sary dia mahazo ny fanavaozana lehibe indrindra hatramin'izao